၁၂ ရာသီဖွား အကျင့်စရိုက်လေးများ အပိုင်း (၃) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » ၁၂ ရာသီဖွား အကျင့်စရိုက်လေးများ အပိုင်း (၃)
၁၂ ရာသီဖွား အကျင့်စရိုက်လေးများ အပိုင်း (၃)
Posted by ဇီဇီ on Sep 6, 2013 in Entertainment, Society & Lifestyle | 24 comments
၁၂ ရာသီဖွား အကျင့်စရိုက်လေးများ (၁) က ဒီ မှာ http://myanmargazette.net/154452
၁၂ ရာသီဖွား အကျင့်စရိုက်လေးများ (၂) က ဒီမှာ http://myanmargazette.net/164012
ခု ၁၂ ရာသီဖွား အကျင့်စရိုက်လေးများ အပိုင်း (၃) လာပြီ။
စာရေးဖို့ အချိန်မရှိ၊ ဘာဓာတ်ပုံမှလည်းမရှိလို့ ဒါအရင် တင်လိုက်တယ်။
ကျနော် က ကန်ရာသီ ပါ။
မှားတာ မှန်တာ အပျော်ပါ။
အနော်က အောက်တိုဘာ ၂၁ ဆိုတော့ တူရာသီ
ဘာရာသီဖွာ:လဲ အသည်းအသန်ပြန်ရှာရတယ်.. မိန်ရာသီဖွား
ညနေကျောင်းကြိုလာတဲ့ တူမလေးက ရုံးမဆင်းသေးဘူးဆိုရင် ပုံပြင်စာအုပ်တို့ ကာတွန်းဟာသ စာအုပ်လေးတွေ ပေးပြီးဖတ်စေကာ စောင့်ခိုင်းရတာ ဒီနေ့တော့ ဒေါ်ကေဇီရဲ့ ဒီပိုစ့်ကို ဖွင့်ထားပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေပြီဗျ။ ကျေးဇူးဗျို့။
Leo ခေါ် သိလ် ရာသီဖွားပါ မိုက်မိုက်ရေ။
ပုံ.. ပျင်းရမှာပျင်းသော ငပျင်း
Virgo ခေါ် ကန် ရာသီပါသူကြီးရေ။
Happy Belated Birthday ပါ။
ဟယ်တွားဘီ… ဒီလူဂျီးနဲ့များ တစ်ရာသီဖွားထဲလာဖြစ်ပလေဒယ်…
အရင်တစ်ခေါက်တုံးကလိုပဲ ပုံလေးတွေကူးသွားတယ် ဆွိရေ
ရမ်းရမ်း တော်တဲ့ ရာဒီဘွားဒွေ ပါဆို။
KZ က အရမ်းတော် တာပဲ။ မေးလိုက်ရင် ဒက်ခနဲ ( ဟဲ ဟဲ မြှောက်တာ ) ။ ကျနော် က ၃၁ ဒီဇင်ဘာညမွေး ဆိုတော့ မကာရ ပေါ့နော။
ဟုတ်ပ။ မကာရ စစ်စစ်ပါ။
ဒါဆို သဂျီးနဲ့သားသား
အဲဒီ စကားကို မယုံရဲတော့ဘူး
ကျနော်က ဂျူလိုင် ၂၂ ဆိုတော့ ကရကဋ် လို့ရေးတာတွေ့လိုက်၊ သိဟ်လို့ရေးတာတွေ့လိုက်နဲ့ ကိုယ့်ကို ကိုယ်တောင် ဘာမှန်းမသိတော့ဘူး။ ပုံလေးတွေကတော့ ကြည့်လို့ကောင်းတယ်။
Leo (♌) is the fifth astrological sign of the zodiac, originating from the constellation of Leo. It spans the 120-150th degree of the Tropical zodiac, between 125.25 and 152.75 degree of celestial longitude, which the Sun transits this area on average between July 23 to August 22 each year.
ဒါကြောင့် ကဗျာဉာဏ်တွေ ထွက်တာကိုးးး
အပိုင်း နှစ် နဲ့ သုံး ကြားမှာ အတော် ကွာသကိုး
ကြည့်ရှု မှတ်သားကာ အတွေးပွား သွားတယ် ဂျီးဒေါ်….
အတော်များများ တူ နေတာကိုး..။
ဒါနဲ့ ဇဂါးမစပ် ကျုပ်မှာ ရဲဇား ရှိသဗျ နော့..။
မေ၃၀ ဆိုတော့ မေထုန်ပေါ့နော်…
ဂျီမနီ ပန်းကလေး ပါ။